चोरीको सुचना दिँदा सखाप भयो पूरै परिवार – Online Nepal
चोरीको सुचना दिँदा सखाप भयो पूरै परिवार
March 11, 2020 535
चोरीको सुचना दिएका कारण एक परिवारका पति–पत्नीसहित ३ जना व्यक्तिको ह त्या भएको छ। पति, पत्नी र भाइ गरी ३ जनाको सामूहिक ह त्या भएको हो। घ टना भारतको तमिलनाडुको सेलम जिल्लास्थित आगरा भन्ने स्थानको हो। त्यहाँको एत्माद्दौलास्थित राकेश नगरका ३२ वर्षीय आकाश उनकी पत्नी ३० वर्षीया बन्दना र उनका काकाका १७ वर्षीय छोरा सनीको ह त्या भएको त्यहाँका प्रहरी अधिकारीलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
आकाशका ८ महिने छोरा भने वे पत्ता रहेको बताइएको छ। राकेश नगर निवासी आकाश करिब ५ वर्षदेखि तमिलनाडुको सेलममा चाँदीको पाउजु बनाउने काम गर्दै आएका थिए। उनी पत्नी र छोराका साथ बस्दै आएका थिए। केही समयपछि उनले आफ्ना काकाका छोरा सनीलाई पनि आफ्नो साथ ल्याएका थिए। ह त्याको घ टना बारे जानकारी पाएपछि प्रहरीले सोमबार बिहान मृ तक आकाशका परिवारलाई खबर गरेको थियो। आकाशले ३ महिना पहिले कारखानामा चाँदी चोरीको जानकारी मालिकलाई दिएका थिए। उक्त दुस्मनीका का रण चो री गर्ने रंजिशले उनको परिवारको ह त्या गरेको मृतक आकाशका परिवारजनको आ शं का छ।
जुन कारखानामा आकाशले काम गर्दै आएका थिए, त्यहाँ तीन महिनाअघि लाखौँ रुपैयाँको चाँदी चो री भएको थियो। उक्त कुराको सुचना आकाशले मालिकलाई लिएका थिए। जसका कारण रंजिसले आकाशलाई फेब्रअरीसम्म बसिरहेको ठाउँ छोड्न धम्की दिदै आएका थिए। तर आकाशले उनको कुराको वेवा स्ता गर्दै आएको परिवारजनले बताएका छन्। यद्यपी ह त्याको कार ण भने पु ष्टी हुन बाँकी छ। प्रहरीले घट नाका बारेमा अनु सन्धान भइरहेको जनाएको छ।
Prevआजपनि बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको विनिमयदर कति ?
Nextनेपालबाट श्रीमती र छोरी ल्याउने प्रक्रियामा रहेका बाग्लुङका केसीको अमेरिकामा सुतेकै अवस्थामा नि’धन
जीवनमा २ सय भन्दा धेरै पुरुषहरुसँग सम्बन्ध तर विवाह भने कुकुरसँग, यस्तो छ अनौठो कारण ?
हिजो बढेको सुनको मुल्य,आज भने सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै घट्यो
यिनै हुन् जसले आफ्नै हतियारले लिए आफ्नै देह